Ataribox: iyo yengano Atari koni yakaberekwazve | Linux Vakapindwa muropa
Wese munhu, kunyangwe mudiki, achaziva zita ra Atari, iyo ngano yakasimba uyo akararama zera regoridhe munyika yemitambo yemavhidhiyo. Yakava imwe yemakambani akakurisa akazvimirira emitambo yemavhidhiyo muUS, ichipayona arcade mitambo yemavhidhiyo. Humambo hwese hwevaraidzo yedhijitari hwakagadzirwa nekubudirira kukuru uye zviitiko zvakakosha zvatinoziva tese, senge Atari 2600 koni, 8-bit microcomputer senge Atari 800XL, ichiteverwa ne16-bit dzakateedzana seAtari ST, yaishandisa Motorola 68k machipisi, kana Atari Portfolio (yekutanga PDA inoenderana nePC XT), nezvimwe.
Zvakare musoftware world tinowana mazita anozivikanwa akabuda mufekitori iyi, senge mutambo wevhidhiyo Pong, Asteroids, Pac-man, Defender, kana zvimwe zvekare zvemazuva ano se Unreal Tournament, Dragon Ball, Mutyairi, nezvimwe. Zvakanaka, ivo vanoda femu iyi vane mhanza, kubvira Iyo Atari koni yadzoka, ndiyo Ataribox yatinotoziva mamwe data. Kusvika nguva pfupi yadarika kwaingova nerunyerekupe kana dzimwe nhau nezvake, asi ruzivo diki rwaizivikanwa kusvika parizvino. Zvino, nekuda kwehumwe sosi senge VentureBeat, zvakavanzika zvakawanda zvakaburitswa pamusoro pechichave ichi nzvimbo yemitambo yekuvandudza ...
Mune kubvunzurudzwa kwepakati nepakati, iye mugadziri weConfiggal MacConuladh akafambira mberi zvimwe zvinhu, uye izvi zvine muto kwazvo. Zvirokwazvo uri kushamisika kuti nei nhau idzi mune svikiro nezve Linux uye yemahara software, zvakanaka, mhinduro iri nyore, inoshandisa Linux sisitimu yekushandisa ine remodeled interface kuti ienderane neTV. Hongu, imwe Steam Machine! Asi ini ndinovimba iyi inobudirira kupfuura yaValve. Pamusoro peizvozvo, iyo Hardware ichave zvakare yepamusoro-notch, ine AMD machipisi (CPU uye tsika yeGPU) uye mutengo unenge uri pakati pe200 nemazana matatu emadhora pamusika. Ini ndinofungidzira kuti painosvika kuEurope ichatengesa pakati pe € 300 ne € 200 sezvazvinowanzoitwa muindasitiri, ichishandura madhora kuva € (chimwe chinhu chinorwadza vatengi veEurope asi iyo indasitiri ichiti ndiyo muripo wekutengesa kune kondinendi yekare. ..).
Atari anoda kuunganidza mari inokwana mari, kutanga mushandirapamwe we kuungana yeprojekti yako paIndiegogo. Ichatanga kudonha uku uye mumwedzi mishoma tichava nekoni pamusika, sezvo zvinoita sekunge ichabuda muchirimo chegore rinouya. Uye zvakare, zano harisi rekukwikwidza chete nePS4, Xbox One, Wii, kana Steam Machine, asi kudzoreredza zvimwe zvechishuwo uye nekugona kumhanya mitambo yechinyakare yeiyo yakasimba pairi. Kune izvi ivo vachaburitsa katarogu nyowani yemitambo yakasarudzika yevatengi, kunyangwe ivo vasingade kuzvimisikidza ivo chete, asi zvakare kuti inokwanisa kufambisa yakawanda yemazuva ano mitambo yemavhidhiyo senge Minecraft kana Terraria, pakati pevamwe. Naizvozvo, unenge uri musanganiswa pakati peazvino neyevintage.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ataribox: iyo yengano Atari koni inoberekwazve
Isaac Diaz akadaro
Inotaridzika kunge inonakidza, tinovimba ichabudirira nekuti chingave chimurenga chikuru zvese zveindasitiri yemavhidhiyo (sezvaive Atari 2600 panguva iyoyo) uye neLinux nyika. Ehezve, ivo vaigona kuitengesa isingadhuri (semuenzaniso € 190/200, zvingave zvakanaka).
Pindura kuna Isaac Díaz